Dzidza Kutamba Nice | Martech Zone
Muvhuro, October 10, 2011 Muvhuro, October 10, 2011 Douglas Karr
Kana iwe ukatarisa kumashure kune nhoroondo yeiyi blog, iwe uchaona kuti isu tinofara nekutsvaga matekinoroji matsva uye kudzidzisa vaverengi vedu paari. Kunze kwekunge kambani iri kuita chimwe chinhu chisina hunhu kana kungoita sebenzi, isu tinowanzo kuve akanaka munzira yedu. Ini handidi kuti iyi blog iwedzere kukura zvekuti tinogona kuviga mamwe makambani tichisimudzira mamwe… uye nokutendeseka zvinondishungurudza kana vamwe vangu vandinonyanya kufambidzana navo vatora iwo mabara pachena.
Zvekare sezvazuro, ndakagamuchira zvichemo kubva trolls. Chii chinonzi troll?
MuInternet slang, troll mumwe munhu anotumira mameseji ekuvhiringidza, ekunze, kana asiri-epamhepo munharaunda yepamhepo, senge yepamhepo hurukuro musangano, nzvimbo yekutaura, kana blog, nechinangwa chekutanga chekukonzera vaverengi kupindura mupfungwa kana neimwe nzira kukanganisa zvakajairika pane-nhaurwa hurukuro.
Ini ndaizowedzera mamwe akati wandei hunhu… trolls anowanzova mbwende uye anovanda pasi pekusazivikanwa. Uye pane ino blog, trolls kazhinji vanoedza kukanganisa makambani atiri kunyora nezvazvo.
Ndichaedza kakati wandei kuti ndipindure kune troll, asi kana ndikavaona vachitsvaga kudaidza mazita nekuregeredza chokwadi, ndinomira kutaura navo. Ndinorega bhizinesi rizive kuti vakashoropodzwa. Kana iro bhizinesi rikaedza kugadzirisa mamiriro acho uye risingakwanise (zvinoitika nekuda kwekusazivikanwa), ini ndinobvisa chirevo.
Sei? Hakusi iko kupa kambani kupfuura? Iko kusatendeseka kwepfungwa here?
Handifungi kudaro. Pandinobvunzurudza kambani, tora zvidzitiro, uye ndotsanangura maitiro avo, handisi kuyedza kukutorera sarudzo yekutenga. Ndiri kunyora pfupi blog positi zvichibva pakushambadzira kwekambani, mhinduro kana chigadzirwa zvigadzirwa uye ndiri kugovera icho chishandiso ichi uye nemabatiro andinotenda kuti anogona kubatsira mushambadzi. Iwo makambani akashanda nesimba kuti chigadzirwa chive chakatangwa uye kutora njodzi hombe nekuzviisa kunze uko kwekushoropodzwa.
Vamwe vanhu vanongovenga makambani (tiri kuona yakawanda yeaya nguva pfupi yadarika). Ini ndine yavo sweetspot kwavari nekuti ini ndakashandira vazhinji vadiki kutanga. Ndakaona kuzvipira - mumari, nguva uye mhuri - zvinoitwa nevanhu kuyedza kutora chimwe chinhu kubva pane zano, kurota kuchokwadi. Izvo zvinotora tani yebasa… uye makambani mazhinji haanyatso kubudirira. Ini handidi kuti makambani adonhe… vachiona vatangi nevashandi vachirasikirwa nezvose. Hapana munhu anofanirwa.
Kumwe kutaura kwakashata kunogona kuisa kambani kuzvidzivirira. Ndakaona zvichiitika kune imwe yemakambani andakashandira… mumwe munhu akatsoropodza bhizimusi repamhepo uye havana kuzombopora kubva pakaenda hutachiona uye vakakuvara kuva mune yekutengesa hurukuro dzese dzegore rinotevera. Zvaive zvakaomarara… uye zvisina basa. Havasi vatungamiriri chete vane kugona kuzviita futi, chero… imwe yakapfava zvemukati inogona kutanga spark inotyaira bhizinesi pasi.
Saka, ndinonzwa kuti ndine basa kune vese vaverengi uye makambani nekupa vanhu zvakanakira kusahadzika. Kana mupinduri achida kubuda mumumvuri uye nekushoropodza zvine mutsindo kambani - ndiyo hurukuro yakanaka yekuve nayo. Asi kana troll ikarova uye ikaputira iyo positi zvisingazivikanwe, ini handisi kuzongo tsungirira nazvo. Ini ndichapindura kamwe kana kaviri uyezve hurukuro yapera. Kana vakaenderera, ini handisi kuzovapa mimwe mikana.
Kune makambani mazhinji andakarasikirwa neruremekedzo pamusoro pemakore… asi ini handisi kuzoedza kuvaparadza. Ini handingo vape chero kutarisisa pane ino blog. Ndiwo mukana wandinayo - kukurudzira makambani makuru uye kufuratira iwo anoda kuenda. Kana iwe uchida kundidenha pane chimwe chezvinyorwa zvangu, ndinogamuchira kushoropodzwa! Asi kana uchingodaidzira uye kudaidza mazita, ini handifanire kuzviteerera.
Ndinotarisira kuenderera mberi nekukurukurirana!